Yedu yekudzivirira mutemo yeCOVID-19 - hannari-shopu
Yedu yekudzivirira mutemo yeCOVID-19
Anodiwa Akakoshesa Mutengi,
Tinonzwa kusuwa tichifunga nezvemhedzisiro yehutachiona hwekorona mukati
Nyika, vanhu vanotapukirwa, uye vanhu vakavakomberedza. Uye izvo zvinofanirwa kuve zvakaoma kurarama hupenyu husina tsarukano, kunyanya mune dzimwe nzvimbo pane kuvharwa.
Hofisi yedu iri muKagawa Prefecture muJapan, umo pasina kurambidzwa kwakapihwa.
Nezve mamiriro emabhizinesi, isu tave kukwanisa kupindura kubva pakurongeka kuenda shipment pasina kunonoka kana matambudziko mushe. Zvakare, sezvatinogara tichiita, isu tinoita disinawari neinoteedzera huwandu hweozone kuitira kuendesa zvigadzirwa kune vatengi mune yakachena mamiriro.
Isu tinovimba hupenyu hune hutano huchadzoka kune vatengi vedu nekukurumidza sezvinobvira.